Xa usathi abazalwane bayabhora awukakeva ngeSDASM – Activate Online
Home / isiXhosa / Xa usathi abazalwane bayabhora awukakeva ngeSDASM
photo by Tim Giddings
Xa usathi abazalwane bayabhora awukakeva ngeSDASM
SebBurger 17/09/2014	isiXhosa Leave a comment 4,558 Views
A Forest Begins with a Seed
Words by Philasande Mfaba
Photograph by Tim Giddings
Kukho aba bantu bangavani ncam nokujuxuza kwiindawo ezifana nePrime, Rat & Parrat nezinye. Makwenzeke ke ukuba uzichophele isithukuthezi siyakubulala koko ezi ndawo awuzimiselanga kwaphela ukuzityelela. Ukubukela iifilimu, ividiyo sokukukruqule kwaphela.
Ithi xa ifika into ethi qala icawe ufikelwe zeza ntetho zabantu zithi abazalwane babhora ukodlula ukugcakamela ilanga. Ube nomfanekiso waloo mfundisi edwaba phambi kwakho, kulandele amaculo kuthandazwe emva koko elowo axwaye okungokwakhe azive endleleni. Rhabul’ apha ke sike sikunabisele ngoko ungake udibane nako kwiicawe zabafundi apha eRhodes.
I-Seveth Day Advertise Student Movement (SDASM) ngenye yezo nkonzo zivulelwe abafundi baseRhodes. U-Asipheli Komeni ongunobhala weSabbath School committee kule nkonzo uthi, “ukuhamba inkonzo kundikhulise ngokomphefumlo, ngenyama nasengqondweni”. uSonwabiso Damana yena ongumphathi we-personal ministries uthi, “ukuba bendingeyongxenye yale nkonzo ngabe kungoku ndizifumana phakathi kwemimoya emdaka, ndinyuse inyevu ndingazi apho ndibheka ngakhona, icawe indibonise obunye ubomi obunelitha, kungoku nditya ukutya okuphilileyo, ndinxebelelana ngendlela ephucukileyo nabantu, zizinto ezo endizifunde enkonzweni”. Aba bafundi baqhuba basibalisele ngoko kuthi kwenzeke kule nkonzo, beyikhaba ngawo omane into yokuba ‘thina bazalwane siyabhora’. “eSDASM okokuqala ufumana abahlobo, uthando,wondleke nasebuchotsheni, de nawe uzive umane ufuna ukubuyela izihlandlo zibe liqela” ugxininisa enjenje uKomeni.
Eyona nto ithi ‘yiza’ kule cawe zezo zinto zithi zenziwe apho, uSonwabiso Damani uthi,kule cawe abaxazululi micimbi ephathelene noThixo kuphela. Uyokuthuka uyowa xa ufumanisa ukuba kukho umnyadala womculo oqhuba unyaka nonyaka, abafundi bafumana nethuba lokutyelela ezinye iiyunivesithi ezine-SDASM ezifana ne Walter Sisulu, iFort Hare, apho abafundi bafumana ithuba lokunabisa izimvo zabo, bakhe ubuhlobo, kufundwe kubemnandi kube yiloo nto. Kanti neeKampu zikho kwalapha, unyaka nonyak le nkonzo iziva ngolwandle, bagcebeleke apho impela-veki yonke. kuthi xa sekuzophela unyaka kubekho umcimbi owenzelwa abafundi abenza unyaka wokugqibela kwihotela ekhethekileyo. U-Sonwabiso Damana wongeza athi, “qho ngeecawe iintombi ziyadibana zidlale inet ball de abafana bona badlale ibhola leenyawo. Emva koko siye kwizindlu zokuphekela kwalapha eRhodes, sifundisane ukupheka”. Likho nexesha loonondaba, ungacingi ukuba kushwanqwa ibhayibhile yodwa, abafundi emva kwenkonzo badibana bonke bancokole ngezepolitiki, ezimidlalo njalo njalo. Kanti kusekho neqela labafana bodwa i-Deacon division kunye neleentombi i-deaconies division nalapha kuseziincoko ezakhayo, kunikwana iingcebiso njalo njalo.
“Usathane usebenzisa ukutya ukulinga abantu, yiyo loo nto apha eSDASM sineHealth Diet Division” utsho uAsipheli ecaphula kwiincwadi zeGenesisi isahluko sokuqala kwivesi yamashumi amabini anethoba. “iSDASM inamayez endalo abathi becbise ukuba lowo ugulayo asebenzise wona. “Xa ubani egula uya kugqirha de ugqirha axele into emphethe kodwa asifuni mayeza akhe kuba simlatha la wendalo siwathembileyo lowo uthe waxilongwa isifo” uqhuba atsho uAsipheli. Kukwakho nolwazi oluphatheleni noko unokukutya okulungele impilo yakho, into ethi lowo ongene egula uyophuma ephilile, nongene ephilile uyophuma ephile saka. uSonwabiso uthi kule nkonzo abafaki nkolelo kubantu ngenkani, koko batyhila inyani, bayixhase ngebhayibhile. Uthi xa eyigxininisa le nyewe uAsipheli, “njengabantu abafunda kakhulu ibhayibhile, intshumayelo kunye nemfundiso oyifumana apha ngeyona inyanisekileyo”.
Masike sibuye umva ke, nguwe lo unesithukuthezi, ucinga ngokuqala icawe kufike ezaa ngcinga zingokubhora kwayo. Nantsi iSDASM iqulethe oku kugxininiswe ngentla, usatsho ukuba abazalwane yababhora?
grahamstown SDASM Seventh day Adventist	2014-09-17
Tags grahamstown SDASM Seventh day Adventist
Previous The Springbok’s quota question
Next Umsitho weelwimi ezininzi